नेपालगन्ज । भारतको उत्तराखण्डस्थित हरिद्वारमा हरेक १२ वर्षमा लाग्ने कुम्भमेलामा सोमबार २० लाख भन्दा बढीले गंगा स्नान गरेका छन् । पाप पखालिने र मोक्ष प्राप्त हुने जनविश्वास रहेकाले विश्वभरका हिन्दु धर्मावलम्बी यो बेलामा गंगा स्नान गर्न जाने गर्छन् । सोमबार दिउँसोसम्म २१ लाख भन्दा बढीले गंगा स्नान गरेको कुम्भमेला आयोजकले दावी गरेको छ । आज […]
माघ १९, २०७७ माघ १९, २०७७ हिमचुली खबरLeaveaComment on के तपाईलाई थाहा छ, चील र उल्लूले यस देशका राष्ट्रपतिलाई सुरक्षा दिन्छ
राष्ट्रपति जो बिडेनले धेरै देशका गैर-अमेरिकी नागरिकका लागि कोरोना भाइरस ट्राभल प्रतिबन्ध पुनःस्थापित गर्ने बारे समाचार आएको छ । संयुक्त राज्यले ब्राजिलमा पहिलो फेला परेको कोभिड-१९ भेरियन्टको पहिलो ज्ञात मामला रिपोर्ट गरेको छ ।मिनेसोटा स्वास्थ्य विभागले सोमबार उक्त मामलाको पुष्टि गर्‍यो, सोही दिन राष्ट्रपति जो बिडेनले हालसालै ब्राजिल, दक्षिण अफ्रिका र युरोपका धेरै देशहरूमा अमेरिका […]
माघ १३, २०७७ माघ १३, २०७७ हिमचुली खबरLeaveaComment on १० बर्ष पछि इजिप्टको सेना क्रान्ति
१९ औं शताब्दीदेखि यता इजिप्टको सेनाले उक्त देश शासन गर्न एक बाहिरी भूमिका खेलेको छ र अरब वसन्त क्रान्ति पछि उत्तरोत्तर जारी छ ।लामो समयदेखि इजिप्टेली राष्ट्रपति होसनी मुबारकलाई फेब्रुअरी ११, २०११ मा राजीनामा गर्न बाध्य पार्ने ऐतिहासिक निर्णय पछि मिश्री सेना र यसको शीर्ष ब्रासले इजिप्टमाथि सर्वोच्च शासन गरे । इजिप्टको सेनाका २५ वरिष्ठ […]
यी व्यक्तिले अनौठो काम गरेर बनाए विश्व रेकर्ड !
पुस १२, २०७७ पुस १२, २०७७ हिमचुली खबरLeaveaComment on यी व्यक्तिले अनौठो काम गरेर बनाए विश्व रेकर्ड !
केहि दिन यता धेरै चिसो बढीरहेको छ । यस्तो बेलामा काममा भन्दा मानिस धेरै घरमै घाम तापेर सुत्न चाहन्छ । किनभने मानिस घाममा बसेर तातो चियाको चुस्की लिन चाहन्छ । तर अहिले एउटा समाचार भाइरल बनिरहेको छ । एक व्यक्तिले एउटा अनौठो काम गरेर विश्व रेकर्ड बनाएका छन् । प्रान्सका रोमन भ्यान्डेन्डोर्पले २ घण्टा ३५ […]